अहिले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको धारणा ऋणीलाइ कसरि बचाउने भन्ने हुनु पर्दछ:डा . विनोद आत्र्यसंगको अन्तर्वार्ता (भिडियो सहित) – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
अर्थ राजनीतिप्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७७, शुक्रबार December 4, 2020
कार्यकर्म बैंकिंग सेरोफेरोमा स्वागत छ !
आरामै हुनुहुन्छ !
एकदम ठिक छु
डाक्टरसाव दिनहरु कसरि बितिरहेका छन ।आज भोलि के मा बेस्थ हुनुहुन्छ, समय पनि अलि प्रतिकुल छ ?
अहिलेको कोभिड्को महामारीको समय छ । यो सबैमा अफिस पनि आउनु पर्यो र अफिस पनि संचालन गर्नु पर्यो र सुरक्षाका उपायहरु पनि अब्लंबन गर्नुपर्यो र स्टाफहरुको सुरक्षा पनि हेर्नपर्यो र बिजनेश व्यवसायलाई पनि हेर्नपर्यो । आफ्नो कामलाई पनि हेर्न पर्यो । यसरी कहिले घर, कहिले अफिस, कहिले काममा समय बिती राखेको छ ।
डाक्टर साव रिटाअर्ड एज हैन, अफिस पनि भन्नु भयो व्यवसाय पनि भन्नु भयो एक्ज्याकट भन्नु पर्दा के मा बेस्थ हुनुहुन्छ ?
यहाहरुलाई थाहा नै छ म रास्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशको पदबाट रिटार भाको करिब करिब ५ वर्ष हुन् लागिसक्यो । यो ५ वर्षको अवधिमा रास्ट्र बैंकबाट रिटार भैसके पनि लाइफ अत्यन्तनै याक्तिभ भएर चाहि अहिले सम्म बितित भएको अवस्था छ । मेरा समय चाहि इमार्जिंग नेपाल लिमिटेडलाइ स्थापना गर्न लगाइयो त्यसपछि केयरयटिगमा स्थापना गर्न लगाइयो र त्यसपछि नेपालको बैंक स्थापना गर्ने काममा संलग्न भए त्यस पछि अहिले आएर बैंकिंग फैन्यासंसियाल इन्सुरेंस भन्नि संस्था छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि भनेर सोचेर स्थापना गरेको संस्था हो । अहिले त्यसकै नेतृत्व बहन गरेर बसिराखेको छु ।
यो जुन डाक्टर सावले भन्नु भयोनी बैंक फाइन्यन्स इन्सुरेन्स नेपाल हजुरले नेतृत्व गरि राख्नु भा छ, यो के उदेश्यले स्थापना भएको थियो र अहिले यसले के काम गर्छ पटिकुलरलि,याक्ज्याकलि भन्नु पर्दा ?
म यहाँहरुलाई के भन्न चाहान्छु भनि कम्पेर टू अदर कन्ट्री नेपालमा जनसक्ति विकासको व्यवस्था अलि कमजोर रहेको अवस्था छरिद्या । यो कुरालाई चाहि नेपाल रास्ट्र बैंकले रिद्यबाट मनन गरेर नै कर्मचारी खर्चको ३% रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीको विकासमा खर्च गर्नु पर्छ भन्ने नीति गत व्यवस्था चाहि मौद्रिक नीतिबाट गरियो । त्यो गरिसके पछी चाहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीको विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई नयाँ नयाँ कुराहरु सिकाउनु पर्छ । विश्वमा भएका परिवर्तनहरुको ज्ञान पनि बैंकहरुलाई दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्चतह देखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनु पर्छ । इभन संचालक शिक्षा आयोजना गर्नुपर्छ । कर्मचारिहरुको विकासको लागि खर्च गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता आएको कारणले गर्दा खेरि चाहि एउटा यत्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था छ ए, बि, सी, डी बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यस्तै फ़ाइनयन्स सेक्टरमा अरु संस्थाहरु पनि छन । यो सबैको विकास गर्नको लागि सबै कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने एउटा यी बैंक तथा संस्थाहरुको रिसर्चको निड छ भने त्यो रिसर्चको निडलाइ परिपूर्ति गर्ने त्यसपछि आएर उनीहरुलाई चाहिने अनलाइन कोर्षेसहरु दिने जनसक्ति परिपूर्ति गर्नको लागि हुमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट रिक्कुमेंटको कामहरु गर्न पर्छ भने गरिदिने फाइन्यन्स इन्ट्रेस्टलाइ अगाडी बढाउन यो संस्थाले के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरुलाई अगाडी बढाउने । यी कुराहरु गर्नकै लागि भनेर नै चाहि यो संस्थाहरु ७ वटा कमर्सियल बैंक दुइटा विकास बैंक दुइटा वित्त कम्पनि दुइटा लघुवित्त संस्थाहरु दुइटा क्यापिटल मार्केटका संस्थाहरु र इमेर्जिंग नेपाल लिमिटेड जसमा नेपाल सरकार समेत शेर भएको संस्था छ । यी १६ वटा संस्था मिलेर चाहि संस्थागत रुपमा कुनै व्यक्तिगत रुपमा होइनकि संस्था गत रुपमै यसको जन्म भएको हो । यो दुइ वर्ष भयो यसको जन्म भएको ।
डाक्टर साव यहि प्रसङ्गमा मैले अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहे, नेपालको बैंकिंग क्षेत्रम जन्सक्तिको गुणसतर कस्तो पाउनु भयो डाक्टर सावले ?
म अहिले पनि के भन्छु भन्दा खेरि नेपालको बैंकिंग सेक्टरको जनसक्तिमा विकास अत्यन्तै आवस्यक छ । अहिले मार्केटिंगमा, हजुरहरु त पत्रकार होइसिन्छ हजुरहरुलाई थाहानै छ कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एउटा बैंकको कर्मचारीलाई तानेर अर्को बैंकमा लाने परम्परा पनि छ । मैले देखेको मेरो यदी व्यक्तिगत धारणा सोच्नु हुन्छ भने चाही मिडिल लेबल याभोभमा चाहि कर्मचारीको आवस्यकता एकदम रुपमा मैले देख्दछु । क्यापासिटी डेपलप्मेंट गर्नु पर्ने चाही एकदम आवस्यक छ । तल बटम लेबलमा जुनिअर अफिसर भन्नु अहिले एमबिए, बिए, ग्रयाजुएट गरेका जनसक्ति हाम्रो नेपालमा अभाव छैन तर जुन सिपयुक्त जनसक्तिको चाहि मिडल लेबल एभोवमा चाहि कमि कमजोरीहरु देखेको चाहि महिले महसुस गरेको छु किन भन्दा खेरि मैले नेपाल बैंककोनि सीइओ भएर पनि काम गरिसके त्यो मसंग अनुभव छ र अहिले पनि कतिपय संस्था बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु । त्य पनि हाम्रा कुराहरु भैरा हुन्छन र विकासलाई हेर्नी हो भनि बैंकिंग सेक्टरको क्यापासिटी डेपलपमेन्टको कुरालाई हेर्दा खेरि याजुकेसं सिस्टमलाइ हेरिसो र त्यसपछी आएय्रा त्रयडिंग प्रोभाइडको दिष्टिकोणबाट हेर्न हो भने यानबिए जन्मेको छ । त्यस पछी आएर अहिले भखरै आएर केन्द्रीय बैंकले गएको ५ वर्षमा कर्मचारी विकासको लागि खर्च गर्नु पर्छ भनेसी बल्ल कमरसियल बैंकहरुले आफ्नो लार्जिनेंट शेरहरु खोलेर कर्मचारीहरुलाई विकास गर्ने काम सुरु गरेका हुन् । त्यो भन्दा अगाडी त कर्मचारी विकासको जुन प्रयास गर्नुपर्ने थियो , जुन खर्च गरिनु पर्ने थियो र जुन त्यसको आवस्यकता कमर्सियल बैंकहरुले त्यति महुसस गरेको महिले पनि अनुभव गरेको छैन । त्यहि भएर चाहि जुन यहाँले भन्नु भयो, म के भन्न चाहान्छु भने साच्चैनै जनसक्ति विकासको खाचो छ । अझै गर्न पर्ने कुराहरु चाहि प्रसस्त छन जस्तो मलाइ लाग्छ ।
डाक्टर साव कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिंग क्षेत्रमा ठुलो धक्का लागेको छ, असर पारेको छ त्यसमा दुई मत रहेन यहाको धारणामा या ज विज्ञ नेपाल रास्ट्र बैंकमा झन्डै तिन दशक अनुभव नेपाल बैंकको पुर्व कार्यकारी अधिकारि त्यसका अलावा विभीन्न रास्ट्रीय अन्तरास्ट्रीय संस्थासंग अनुभव भएर काम गरेको के भन्छ, समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिंग क्षेत्रमा कस्तो असर पार्यो र अबको रिभाइवलको बाटो के हुन् सक्छ ?
कोभिड अब त्यसलाई धेरै चर्चा नगरौ यो यति धेरै कन्त्याजिय्स छ कि वि क्यान्ट यान्तिसिपेट यानीथिंग । यसको देपथ कति असर गर्छ भन्ने संसारभरी एउटा गोलि बिना संसारलाई लकडाउनमा पुराईदियो । यल्ले गर्दा खेरि एसको असर ग्लोबल्ली नै परिरहेको छ । यो यहाँहरुलाई थाहा नै छ । अहिले भनमन इन्टरन्यासनल मनिटरि फण्ड वोर्ड बैंकहरुले चाहि विश्वको इकोनोमी चाहि पहिले ३% ले डाउन हुन्थ्यो र इन्तेर्रेतिभ ग्रोथ हुन्छ भनेको थियो तर अहिले आएर ४.४% को नेगेटिभ ग्रोथ हुन्छ भनेर प्रोजेक्सन गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै नेपालको पनि अलि अगाडी १.८ देखि २.८ सम्मको जिपिटि ग्रोथ हुन्छकी भनेको विषय वस्तु थियो भने अहिले आएर ०% ०.२% को हाराहारीमा ग्रोथ हुन्छ भनेर चाहि वोर्ड बैंकहरुले प्रोजेक्सन गरेको अवस्थाहरु छ भने पछी अवस्यनै हरेक रास्ट्रलाइ यो भनम न महिले हेर्दा खेरि चाइनाको मात्र पोजेटिभ ग्रोथ १% जिपिटि ग्रोथ हुन्छकी भन्ने प्रोजेक्सन छ । नेपालको एक प्रकारले राम्रै भनम नेगेटिभ अहिले सम्म भनेको छैन कि त्यसकारण ०%-०.२% को हाराहारीमा ग्रोथ हुन्छ भन्ने पोजेटिभमा नै छ । यसको इनदेप्थ, लंग्गीभिटि कहिले सम्म हुन्छ भन्ने कुरामा पनि भरपर्ने कुराहरु हो हाइ तर अहिले सम्म आएका सिमटमहरुलाई हेर्दाखेरि अब रास्ट्रले चाहि कतै रिभाइवको कुराहरु आउने होकी अब अगाडी बढ्ने होकी भन्ने कुराचाहि देखेको छ । नेपाल सरकारले लेको नीति गत कुराहरुलाई चाहि महिले बताउनु परेन यहाँहरु सबैलाई थाछ र अब अर्को रिभाइवलको कुरा गर्दा खेरि चाहि यहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने रिभाइवलको लागि चाहि एकप्रकारले चाहि उद्योगधन्दाहरु केहि रुपमा खोलेको अवस्था पनि छ, केहि न केहि उत्पादनहरु भइराखेकै छन तर जबसम्म यो भ्याक्सिनको नेपाल भ्याक्सिन आउने भयो आउछ भनेर जुन अहिले चाहि चर्चा चलिरहेको छ । भनम न अहिले अक्सफोर्डको चाहि ७०% इफिसीएनसी भइसकेको छ । इन्डियाले चाहि अक्सफोर्डसंग मिलेर उत्पादन गर्न लागेको छ । अब अमेरिकामा चाहि डिसेम्बर ११बाट चाहि जनताहरुले भ्याक्सिन लिन पाउने भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । अब कोभिडको लंग्गीभिटी कतिसम्म रहने हो यी भ्याक्सिनले कति काम गर्न सक्छन यी त व्यावारमा आएर देखिने कुराहरु हुन् । यसमा उत्पादनको रिभाइवल नै कति सम्म हुन्छ कहाँ सम्म जान्छ भानेको कुरा चाहि यसको एउटा वेवाहारिक पक्षले बताउने कूरा हो । तर अहिले हेर्दा खेरि संकेतहरु चैत्र १० गतेबाट चाहि हामीहरु लकडाउनमा गको हो । अहिले सातआठ महिना गुज्री सकेको छ । अबको तिन चार महिना पछि म पनि के भन्छु भने मार्च, अप्रिल, मे देखि चाहि हामीहरु एक प्रकारले नर्मल लाइफमा जानसक्छौकि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा त्यहि छ ।
डाक्टर साव यो विसंम परिस्थितिमा यहाले भनि नै सक्नुभयो यो कहिले सम्म लम्बिन्छ भन्ने ठेगान छैन, यो विसंम परिस्थितिमा ऋणी संयुक्तको दायित्व के बैंकिंग क्षेत्रको दायित्व के ?
अहिलेको अवस्था भनेको कसरि हामीले ऋणीहरुलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने धारणा हो । त्यो मेरो मात्र धारणा होइनकि पत्रकार मित्रहरुको पनि धारणा हुनु पर्छ, नेपाल सरकारको पनि धारणा हुनुपर्छ र केन्द्रीय बैंकको पनि त्यहि धारणा हुनुपर्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि त्यहि धारणा हुनु पर्छ । बैंक र ग्राहक भनेको त अत्यन्तै जटिल सम्बन्ध हो । ग्रहाक छन त् बैंक छन । ग्राहाक छैनन भने त बैंक पनि छैन । एकजना सरप्लस होर्डरसंग भएको पैसा बैंकमा राखेर, बैंकले डिपोसिट सेक्टरमा लगानी गरेर आम्दानि गर्ने संस्था त बैंक हो त्यसकारण कन्जुमर भनेको महत्वपूर्ण भाग हो । त्यल्लाई अहिलेको प्रसंगमा चाहि म के भन्न चाहान्छु भन्दाखेरि चाही रिमिदिटी कसरि हुन्छ साना ग्राहाकहरुलाई बचाउन नेपाल रास्ट्र बैंक लागि रहेको गरिरहेको महिले महसुस गरिराखेको छु । बैंकहरु पनि कसरि हुन्छ आफ्ना ग्राहाकहरुलाई लोनिहरुलाई दिपोजिटरहरुलाई यो एक वर्ष कोभिडको पिरिअर्डलाइ कसरि समरक्षण गर्नु पर्छ भनेर यो कर्पोरेट सोसल रेसपोनस होकी, सोसल अबलिगेसन भनम यो क्षेत्रमा चाहि बैंकहरु लाग्नु पर्छ भन्ने चाही मेरो नितान्त धारणा छ । यदि बैंकले आज ति ग्राहाकहरुलाई आफ्ना बिजनेस गरेका रिनिहरुलाई सरभाइव गर्न मद्दत गर्यो भने चाहि भोलि ति ग्राहकहरु त्यो बैंक छोडेर अर्को बैंकमा जादैनन् । अहिले बजारमा के आइराछ भने एउटा बैंकले अर्को बैंकको कर्जा खोस्योरे भन्ने कुराहरु आछन यदि मलाइ अप्ठ्यारो परेको छ । मलाइ अप्ठ्यारो परेको बेला मेरो बैंकले मलाइ राम्रो संग मद्दत गर्छ भने त्यो बैंक चाहि भोलि .५% इन्ट्रेस्ट भयो भनि पनि तल माथि जादैन र आत्मियता व्रिद्दी भएर भोलि ग्राहकहरु त्यसरी छोडेर जादैनन । त्यल्ले गर्दा खेरिनै अहिले बैंकको दायित्व भनेको नै सर्वप्रथम आफ्ना कन्जुमरलाइ आफ्ना क्स्तुमरलाई चाहि कसरि सेफगार्ड गर्ने । अहिलेको यो कोभिड १९को सिचुय्संबाट उनीहरुलाई कसरि रिभाइव गर्ने, उनको बिजनेसधन्दालाइ कसरि प्रोमोट गर्ने भनेमा नै मलाइ केन्द्रित हुन् पर्छ जस्तो लाग्यो र अर्को ग्राहक हजुरले भन्नु भयो यो वर्ष अप्ठ्यारो परेकोमा चाहि बैंकसंग मिलोमत्तो गरेर चाहि एड्भाइज लिएर मा कसरि ससटेन हुन्छु कसरी अगाडी बदन सक्छु र अहिले भएकोई बिजनेशले धान्न नसक्ने नै अवस्था भो भने त्यसलाई डाइभर्ट गरेरे कुनै नयाँ बिजनेसमा जान र बैंकहरुसंग सरसल्ला गर्नु पर्ने पनि यहि नै बेला हो । अहिले भनेको चाहि कमर्सियल बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहाकको धर प्रकट गर्ने, धितो लिलाम गर्न खोज्ने उनीहरुलाई दुख दिने, मोरल टचर दिने जसले दिन सक्दैन भनम न त्यो गर्नी बेला चाहि होइन । यो चाहि म्यासेज चाहि हाम्रो नेपाल रास्ट्र बैंकको गभर्नर सावले पनि किअरली रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको चाहि मैले पनि वेमिनारगरुमा सुनेको छु । अहिले अवस्था भनेको चाहि बैक र ग्राहाकहरु मिलेर अहिलेको अवस्थालाई कसरि पार गर्ने भन्ने र दुवैजना मिल्नु पर्ने चाहि मुख्य द्सायित्व जस्तो लाग्छ ।
डाक्टर साव यहाँले भने जस्तै बैंक र ग्राहाक भनेका परिपुरक हुन् र नङ र मासु जस्तै सम्बन्ध छ, एउटा रह्यो भनि अर्को रहन्छ त्यसमा त दुई मत भएन ऋणीले तिर्नु पर्छ तिर्ने पर्छ बैंक माथिनै हुन्छ उनीहरुले ल्याप्चे लगाएर राखीसकेको हुन्छ अदरवाइज कुनै कानुनि प्रक्रियाबाट उनीहरु माथिनै हुन्छन । बैंकले चाहि आफ्नो दायित्व पालना गरेको छ कि छैन यो विसंम परिस्थितिमा ?
अब दायित्व पालाना गरेको छ कि छैन भन्ने बारेमा एउटा मा सबैभन्दा पहिले बैंक आफै जिम्मेवारी हुन् पर्यो भन्छु म, सेल्फ दिसिपिलें त म्यनटेन गर्दिनु पर्योनी रेगुलेटेड संस्था हो । रास्ट्र बैंकले नीति गत रुपले रेगुलेटेड गर्ने संस्था हो । त्यल्ले गर्दा खेरि अहिले रास्ट्र बैंकले आफुले सक्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु गरि राखेकै छ । सिआरआर ४% लाइ घटाएर ३%मा ल्याको यहाँहरुलाई थाहा नै छ । त्यसपछि आएर अति प्रभावित, प्रभावित भएका सेक्टरहरुलाई चाहि क्लासिफाई गरेर लोन आउदा STRUCTURING गर्दिने भन्ने कुराहरु भइ रहेको छ । डिजिटल बैंकिंगलाइ चाहि अगाडी बढाउनु पर्छ भनेर चाहि डिजिटल बैंकिंगमा सुल्क नलिनु भनेर जारी गरेकै छ । कुनै इनदस्त्रीहरुलाई चाहि वोर्किंग क्यापिटल चाहियो अहिलेको अवस्थामा प्रोजेक्स्न्को २०% वोर्किंग क्यापिटल दिन सकिन्छ भनेर जारि गरेको अवस्था छ । अब बैंकहरुको कुरा आयो हजुरले भनेको, बैंकहरुको दायित्व चाहि ग्राहाकहरुलाई दुख दिएको छनकि छैनन् । ग्राहाकहरुको धितो लिलामी गर्न खोजेको छ्नकी छैनन भन्ने विषयहरु अथवा ग्राहाकलाइ टचर गरेको छनकि छैनन विषयहरु चाहि के हो भन्दा खेरि केन्द्रीय बैंकको सुपेर्भिजं छ । अहिले रास्ट्र बैंक हेर्नु भयो भने बैंकमा अहिलेको कोभिडको अवस्था कस्तो पर्यो भनेर समिति गठन गरेको छ । सबैले अध्यन गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै इन्सपेक्सन याण्ड सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले चाहि बैंकहरुमा सुक्स निरिक्षण गरेर हेरेको छ । अस्ति भर्खर यहाहरुलाई नि था होला कन्जुमर प्रोटेक्सनको लागि भनेर रास्ट्र बैंकले कार्य दिशा तयार गरेर लागु गरेको छ भने पछि सेन्ट्रल बैंकले निगत रुपले गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरु गरि राखेको छ । यता कमर्सियल बैंकले के कति गर्यो भन्ने आफैले नै अहिलेको अवस्थालाई मनन गरेर सेन्ट्रल बैंकको नीति भित्र रहेर कार्यनयन गर्नु चाहि उनीहरुको दायित्व हो । यदि दायित्व उहाहरुले पुरा गर्नु भको छैन भने सेन्ट्रल बैंकले एउटा रेगुलेटली भएको निकायले ज जस्तो गर्नु पर्ने हो भनम न पेनाल्टीको कुराहरु अथवा ति इन्सपेक्सन र सुपरभिजनको कामहरु चाहि नेपाल रास्ट्र बैंकले गर्दिनु पर्छ भन्ने चाहि मेरो धारणा हो ।
भने पछि डाक्टर साव नेपाल रास्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्दिए छ तर बैंकले त्यसमा पालना गरेका छन कि छैनन भन्ने कुरामा यहाँ पनि दुविधामा हुनुहुन्छ ?
त्यो चाहि व्यावारिक हुने कुराहरु हो । त्यसको इन्डिकेटर के हुन् सक्छन त भने भोलि गएर धेरै ग्राहाकहरुले बैंकको गुनासो केन्द्रीय बैंकमा गरे भने गरेनन भन्ने कुरा हो । अहिले गुनासो सुनवाई इकाई त सेन्ट्रल बैंकमा छ । यदी भोलि गएर क्लाइनटले चाहि मलाइ बैंकले दुख दिएर धितो लिलामी भयो भनि बैंकले आफ्नो दायित्व पुरा गरेंनकी भन्ने हुन्छ । त्यसकारण हामीले त्यस्ता इन्डिकेटरहरु मार्केटमा आएकी आएनन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो इन्डिकेटरहरु आइसके पछी बैंकले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको भनेर एकिन गर्ने बल्ल सकिन्छ तर जहासम्मकि मलाइ के लाग्छ भन्दा खेरि नेपालका बैंकका अहिले जति पनि सीइओहरु हुनुहुन्छ । म त प्रायजसो सबैलाई चिन्छु । टे आर वेल डिजर्भ पिपुल । उहाहरु त धेरै अनुभव भको व्यक्तित्वहरु हुनहुन्छ । उहाहरु केन्द्रीय बैंकसंगको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै राम्रो भएको देखिएको छ त्यो कारणले गर्दा खेरि चाहि सेन्ट्रल बैंकले दिएको नीति निर्देशनको दायरा भित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पालना गर्नुहुन्छ भन्ने चाहि मा विस्व्स्त छु ।
तर डाक्टर साव यहि प्रसङ्गमा महिले क्रस कोइसं गर्न चाहे, विभीन्न पत्रपत्रिका खबरमा के सुन्न आएका छन भने यहि लक डाउनकै अवधिमा पनि कतिपय बैंकले चाहि प्रेसर दिएका छन र लिलामीमा समेत प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको भन्ने खबर सुन्नमा आको छ र अर्को कुरा यही प्रसंगमा डाक्टर साव ६%-६.५% निक्षेप ब्याजदरलाइ साढे १ प्रतिशतमा नि झारियो, रास्ट्र बैंकले इन्तेर्मेंट गर्न सक्दैन यहाँ त यति लामो समय नेपाल रास्ट्र बैंकको सीइओ भएर पनि काम गरेको व्यक्तित्व ?
अब डिपोजिट र ल्यांदिंगको ब्याजदरको कुरालाइ मार्केटले दिटरमाइन गर्ने कुरा हो । कुनै बेला डिपोजिटको १२%-१३% सम्म नि पुग्यो । महिले चाहि अहिले डिपोजिटको रेट अफडिपोजिटमा भन्नु हुन्छ भने ल्यान्दिन्ग्को हकमा करीब ९%को हाराहारीमा याफटिको रेट चाहि ८% को हाराहारीमा छ । अब यल्लाई चाहि दिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर भनेको मार्केटमा ळीऊईडीटी नै हो । मार्केटमा कति ळीऊईडीटी छ भन्ने कुरा चाहि इन्ट्रेस्ट रेटलाइ चाहि गोभार्ण गर्ने एउटा वेआउट चाहि त्यो हो । अब अहिले मार्केटमा करिब करिब यहाहरुलाई थाहा नै छ कुनै पनि १७० को सरप्लस लिकुईदिटी छ भनेर मार्केटमा भनिएको अवस्था मात्र छ । करिब २०० अर्वको लिकुईदिटी थियो त्यसमा रास्ट्र बैंकले केहि मपअप गर्दियो । मपअप गरदे पछी अहिलेको लिकुईदिटी १७० अर्वको भन्ने छ । अब यो लिकुईदिटी भएको कारणले पनि यहाहरुलाई थाहा नै छ लकडाउन भयो । लकडाउन भएपछी बिजनेसहरुले इम्पोर्ट गर्न सकेनन र त्यसले गर्दा खेरि उनीहरुलाई चाहिनी जति रकम लिएनन । त्यो कारणले गर्दा खेरि चाहि मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अप्परच्युनिटि कम भएर गयो त्यसको कारणले गर्दा खेरि चाहि लिकुईदिटी सरप्लस भएको हो भनेर चाहि हामि मान्छौ , पक्का त्यहि नै हो । त्यसकारणले गर्दा खेरि चाहि अब बैंकहरुलाई डिपोजिटरलाइ पनि राख्नु पर्ने ठाउँ छ क्रेडिटहरुलाई पनि राल्खन पर्ने छ । दुवैलाई राम्रोसंग राख्नु पर्ने अवस्था छ । त्यल्ले गर्दा खेरि चाहि लोनको एमाउनट घटाए चाहि बढि भो भन्छन । उद्योगिहरुले जहिले त्यहि भन्नि हो । उद्योगिहरुले चाहि जति सक्दो कम इन्ट्रेस रेटमा हामीले बैंकबाट ऋण पाए हुदो हो भन्ने उनीहरुको चाहाना हो । यता तिर तपाइँ जस्तो हामि जस्तो दुइचार पैसा बैंकमा राखेर ब्याजले जिविको पार्जन गर्छौ भन्ने चाहान्छौ हामीलाई पनि एउटा रामै डिपोजिटको रेट पाइदेको भए हुन्थ्यो भन्नि चाहान्छौ । सो यल्लाई डिटरमिनेसं गर्ने नेपालको इन्फ्यासं रेट कति हो त्यलाई एउटा इन्डिकेटरको रुपमा लिने हो र अर्को कुरा मार्केटमा लिकुईदिटी कति छ लिकुईदिटीलाइ त्यसले गाइड गर्ने कुराहरु हो । लोनको हाइ डिमाण्ड हुने भो । धितो आयो भने हाम्रो डिपोजिटको रेट पनि माथि जान्छ । किन भने बैंकलाई चाहि डिपोजिट चाहियो नि । बैंकलाई डिपोजिट चाहिदा खेरि उनीहरुलाई हाइ इन्ट्रेस रेट दिएर पनि डिपोजिट ल्यराउने प्रयास गर्छन । जति मार्केटमा इन्भेस्मेनेटको अप्परच्युनिटि कम हुदै गयो त्यति बेला चाहि डिपोजिटको रेट कम हुदै जाने हो । यसलाई चाहि मार्केटले नै दिटरमाइन गर्ने कुरा हो ।
डाक्टर साव लोनएबल फण्डको प्रसंगमा केहि समय अगाडी सम्म प्रणालीमा लोनएबल फन्ड एक प्रकारले हाहाकार थियो, माग अनुसारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सकी रहेको अवस्था थिएन तर हाल अहिले आएय्र प्रणालीमा अधिक तरलता छ, लगानीका दायरा भनि संकोचित भएको अवस्था छ, यो बैंकिंग क्षेत्रका निमित्त केहि गर्ने अवसर हो या चुनौतीमात्र थपिएको हो ?
म के भन्छु भन्दा खेरि चाहि सबैभन्दा पहिला त १७० अर्वको सरप्लस लिकुईदिटी भनेर भन्छु । यल्लाई मैले लंगटर्म फेनोमेन्म भनेर भन्दिन । नेपालको इकोनोमिको लागि १७० अरवको यदि यहाले १० वटा ठुला प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्नु भयो भने पनि यदि चारपाच अरवको दरले जानु भयो भने पनि यो पैसा चाहि एक प्रकारले जान्छ । मलाइ चाहि अहिले १७० अरवको जुन लिकुईदिटी भनेर भन्या छ यो चाही त्यति ठुलो समस्या म मेरो व्यक्तिगत रुपमा चाहि लिन्न । यदी इन्दिभिज्युल बैंकको लिकुईदिटीलाइ हेर्नु भयो भने कसैको कति होला कसैको बढी होला आफ्नो आफ्नो रेन्जमा छन त्यो एउटा कुरा । हाम्रो चाहि सीडीसी रेसियो चाहि ७२%-७३% को हारहारीमा छ भनेर हामीले भनि रहेको अवस्था चाहि छ । यो चाहि अब लोनीहरुको लागि अप्परच्युनिटि हो भन्छु म किन भने चाहि आज तपाइले कुनै उद्योग धन्दा गर्न सुरु गर्नु भो भने चाहि तपाइले ९%- १०% को हारहारीमा तपाइले इन्ट्रेस बिजनेस लोन लिन सक्नुहुन्छ । आज लिकुईदिटी सरप्लस भएको बेनिफिट कसले लिन सक्छ त भन्दा खेरि उद्योगधन्दाले त्यल्ले गर्दा खेरि कोभिड १९ को अवसरमा पनि बिजनेस व्यवसायहरु फस्टाएको अवस्था पनि छ । कति पय आइडी रिलेतेड होलान्, अनलाइन होलान सिमित क्षेत्रहरु फस्टाएको अवस्था पनि छ । यो बेला चाहि हामि मोर क्रिएटिभ भएर के बिजनेस व्यवसाय अगाडी बढ्न सक्छ सोचेर बैंकहरु संग कर्जा लिने पनि यो बेला हो । त्यहि भएर यो उद्योगि व्यवसाय गर्नेहरुको लागि यो एउटा ठुलो अवसर चाहि पक्कै हो ।
भने पछि बैकिंग क्षेत्रको लागि यो के हो, उद्योगिको लागि अवसर हो ?
बैंकिंग सेक्टरको लागोई त चुनौती हो भन्नु पर्यो । किन भने बैकिंग सेक्टरको लागि यदि तपाइँ संग कुनै आइडल फण्ड छ, तपाइले ब्याज तिर्न पर्यो त्यल्लाई तपाइले लगानी गर्न सक्नु भएको छैन भने त ब्याज तिर्न पर्यो । त्यल्ले गर्दा खेरि बैंकिंग सेक्टरको लागि उनीहरुले आइडल फण्ड नराख्ने र त्यो फण्डलाइ चाहि कर्जामा पार्क गर्ने । यो लिकुईदिटिको लागि चाहि एक प्रकारले अप्परच्युनिटि हो र अर्को यो च्यालेन्ज पनि हुन्सक्छ । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कसरी हुन्छ आफ्ना ग्राहाकहरुलाई रिभाइव गर्ने अहिले भइरहेको ग्राहाको पुजी दिएर चाहि इन्दस्त्रीलाइ सस्तें गराउने बेला
बैंकिंग सेक्टरको लागोई त चुनौती हो भन्नु पर्यो । किन भने बैकिंग सेक्टरको लागि यदि तपाइँ संग कुनै आइडल फण्ड छ, तपाइले ब्याज तिर्न पर्यो त्यल्लाई तपाइले लगानी गर्न सक्नु भएको छैन भने त ब्याज तिर्न पर्यो । त्यल्ले गर्दा खेरि बैंकिंग सेक्टरको लागि उनीहरुले आइडल फण्ड नराख्ने र त्यो फण्डलाइ चाहि कर्जामा पार्क गर्ने । यो लिकुईदिटिको लागि चाहि एक प्रकारले अप्परच्युनिटि हो र अर्को यो च्यालेन्ज पनि हुन्सक्छ । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कसरी हुन्छ आफ्ना ग्राहाकहरुलाई रिभाइव गर्ने अहिले भइरहेको ग्राहाको पुजी दिएर चाहि इन्दस्त्रीलाइ सस्तें गराउने बेला ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै
केपी ओली नेकपाको साधारण सदस्यबाटसमेत निष्कासित
थप १० कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या २०११ पुग्यो